120 sano ee Juquraafiga Qaranka - Geofumadas
120 sano ee Juquraafi Qaran
Febraayo, 2010 tabo cusub
Dhowr sano ka hor, saaxiib ah oo u soo guuray dalkiisa ayaa i siiyey qoraallada Majaladda Qaranka ee Juqraafi, oo wax walba iyo baalooyinkuba hadda qaataan qayb wanaagsan oo ka mid ah buuggaygeyga, markaa marka nuqulka dijitaalka lagu dhawaaqo qalab adag 160 GB Waxaan helay muraayadan aan u ogolaanin inay tagto. Ka dib markii ay sannado badan raadinaysay, in la ogaado sida kombiyuutarka ugu wanaagsan lagu dhawaaqay 1972 oo ay u arkaan in waliba marwalba leenahay mowduuc la mid ah laakiin cilmi-baaris dheeraad ah, waxaan aqoonsanayaa in ay ahayd iibsasho aan qiimo lahayn.
120 sano oo qalab ah, laga bilaabo 1888 ilaa 2008 ayaa ku jira disc 160 GB, inkastoo Solo wuxuu yimaadaa 100 GB oo wuxuu ka tagayaa 60 meel banaan, ma ahan wax khasaare ah. Sidoo kale waa wax aad u macquul ah marka loo eego soo-ururinta DVD-yada kuwaas oo isku-buuqaya inay bedelaan laba ka mid ah saddexda raadinta.
Waxaad raadin kartaa sanadka, tani waxay soo bandhigeysaa liisto muujinaysa daboolida foomka xayawaanka. Markaa waxaad dooran kartaa, raadin kartaa oo aad ku soo bandhigi kartaa wargeysyada online-ka ah ee hadda ah.
Waxaad sidoo kale baari kartaa aag juqraafi, oo muujiya khariidada Bing (horay loo yaqaan Virtual Earth). Markaad ku taallid aag, ku nadiifi raadinta mawduuca, oo tilmaamaya raadin miles. Doorashadani waxay u baahan tahay in lagu xiro internetka, sawirka khariidadu waa mid gaabis ah, laakiin waxaa la filayaa inuu horumar sameeyo mustaqbalka kaas oo noqon kara daaqad weyn.
Raadinta ereyada muhiimka ah waa yaab, tusaale ahaan, haddii aan rabo calanka gobollada Mareykanka, waa inaan meel calanka Mareykanka ayaa sheegay, iyo voila, waxaa la daabacay bishii Oktoobar ee 1917.
Heh, heh, arag sida aad u xiiseyneyso gaasha Colorado waa. Waxaan ku dhaartay inaan arkay meel.
Waxaa sidoo kale jira raadinta ururinta iyo shaqeynta calaamadeynta oo la yiraahdo liiska akhriska, kaas oo aad ku dhejin kartid calaamadaha foomka calaamadaha sida ku cad xiisaha. Tusaale ahaan, sida aan u socdo, mar kasta oo aan helo khariidad xiiso leh, waxaan u gudbin karaa "khariidadaha xiisaha ah ee khariidadaha geofumed" ama "khariidadaha Mexico" tag, si ay u helaan iyaga oo riixaya waqti kasta.
Waxaa lagu horumariyaa Adobe Air, sidaas darteed casriyeynta internetka waa mid farxad leh, dhinacyo badan oo ku saabsan farsamooyinka hore ee aan ka gudbi karin. Markii ugu horreysay ee uu dilo waxa uu ku qaatay wakhti uu soo dejin lahaa dhismo cusub, laakiin wuxuu ku socdaa marxalad.
Hawlwadeenku waa dhexdhexaad ah, tan iyo markii la heli lahaa xogta, abuurista liisaska akhriska iyo dib u socodka iyo dib u socodka waa mid aan sax ahayn. Ka dib markii dhowr saacadood oo la qabatimay ay dareemayso inay sii fiican tahay, inkasta oo aysan wax dhaawac ah u geysaneynin guddi dhinac ah si ay u socdaan maadooyinka iyo hagaajinta si ay u fahmaan sida dib loogu noqdo.
Waxay noqon kartaa hel internetka ee US $ 199 dollars, taas oo u muuqata mid sarreeya, laakiin haddii aan jebinno, iyaga oo u maleyney in ay jirtey joornaalada 12 sanadkiiba, waxay noqon doontaa:
Magaca lagu duubay cajaladda: US $ 9.00
120 sano oo joornaalo ah: US $ 110
Tani, majallad kasta oo dijital ah waxay noqon doontaa mid u qalantaa:
ama calaamadaha 5 ee Euro,
1 Miisaanka Cusub ee Mexico,
ama 1.53 Honduran Lempiras
Gebogabadii, iibsasho weyn. Wiilkaygiiyow, waxyaalahan ku waano qaado, Oo naftaydana kan sharka lahu ha huwadeen.
Miyaad i siin kartaa markaan sii wadi waayo?
Post Previous«Previous 2 Geofunadas oo ku yaala duulimaadka iyo 6
Post Next Beddelaan degrees / daqiiqo / ilbiriqsi jajab tobanleNext »